/ ngwaahịa / R & D mmeghachi omume / Buparlisib (944396-07-0)
SKU: 944396-07-0. Category: R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Buparlisib (CAS 944396-07-0), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Buparlisib ntụ ntụ bụ okwu ọnụ, enweghị ihe ọ bụla, nke a kapịrị ọnụ, na onye nwere ike imechi nke ezinụlọ m na phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K), na ọrụ ya dịka onye na-elekọta anticancer ugbu a nyocha.
Buparlisib isi agwa
Molekụla Formula: C18H21F3N6O2
Ọbara arọ: 410.3935496
Melt Point: 645.7 ± 65.0 Celsius C
Nchekwa Nche: -20 Celsius C
Buparlisib (944396-07-0) iji mee ihe na steroid
Buparlisib (944396-07-0), pan-class I phosphotidyinositol-3-kinase (PI3K) na-emechi.
Ọgwụ Ọrịa Na-ahụ Maka Ọrịa
Buparlisib bụ pan-class I phosphotidyinositol-3-kinase (PI3K) inhibitor. Usoro nke m na-amụ na-enyocha nchekwa, ọgwụcokinetics, na nrụpụta nke buparlisib na capecitabine na ndị nwere ọrịa cancer metastatic.
② Ọrịa na Ụzọ
Ndị ọrịa natara buparlisib otu ugboro kwa ụbọchị (ụdị, 50 ka 100 mg) maka izu 3 na capecitabine ugboro abụọ kwa ụbọchị (ndepụta, 1000 ka 1250 mg / m2) maka izu 2 na izu ụka 1. Mgbanwe nke nhụjuanya jiri usoro omenala "3 + 3" mee ihe na nkọwa nke ọkọlọtọ nke dose-limiting toxicity (DLT) na kachasị ọgwụgwọ.
N'ime ndị ọrịa 25 debanyere aha, 23 bara uru maka DLT na 17 dị oke uru maka nzaghachi. Ngwakọta kachasị elu nke nchikota bụ buparlisib 100 mg kwa ụbọchị na capecitabine 1000 mg / m2 ugboro abụọ kwa ụbọchị. DLT gụnyere 3 hyperglycemia na ọkwa 3 ọkwa. Ihe ngbu nke 3 kachasị elu bụ afọ ọsịsa na ịrị elu nke aspartate aminotransferase na alanine transaminase. Otu onye ọrịa gosipụtara nzaghachi zuru ezu na ọgwụgwọ na mmadụ anọ nwere nkwenye a kwadoro. Na 3 na 4, bụ ndị Buparlisib (944396-07-0) na-anọgide na-adịgide adịgide, ma ụba capecitabine mụbara, enwere ọganihu dị ukwuu na ntinye plasma buparlisib.
Ngwakọta buparlisib na capecitabine na ndị ọrịa na-arịa ọrịa cancer metastatic na-adịkarị mma, na ọtụtụ ndị ọrịa na-egosipụta nzaghachi ogologo oge. Ahụghị na ọnụego PIK3CA dị ala (3 nke 17) dị ala, naanị 2 nke ụbụrụ 7 na ntinye ụkwụ bụ ọkụ, na-eme nchọpụta nke ihe nrịbama amụma ndị a na-atụghị anya. Ọmụmụ ihe ọzọ nke nchikota abụghị ihe ezi uche na-adịghị na ya, yana mgbasa ozi pharmacokinetics na-agbasawanye na ịchọta ihe nyocha iji mee ka mmekọrịta dị elu na iji ọgwụ ọjọọ na-arụ ọrụ na ihe ndị ọzọ na-egosi na ha nwere nzaghachi.
Ngbanwe nke phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) / AKT / mammalian nke ụzọ mgbaàmà nke rapamycin bụ isi maka mmụba na lanarị nke ọtụtụ ọrịa cancer, gụnyere ọrịa cancer ara. Tụkwasị na nke ahụ, nkwụsịtụ nke ntinye PI3K nwere ike inye aka na iguzogide ọtụtụ ndị ọrụ anticancer. Ndị omekorita PI3K nwere ike, dị irè, dị irè ọgwụgwọ antineoplastic. Buparlisib bụ onye nwere ike ikwu na ọ ga-eme ka m nwee ike ịsị na ọ bụ PI3K ezinụlọ. Buparlisib na-egbochi klas nke m PIK3 na PI3K / AKT kinase n'ụzọ mgbaàmà na ATP-asọmpi n'ụzọ, si otú ahụ na-egbochi mmepụta nke ozi ọzọ phosphatidylinositol (3,4,5) -trisphosphate na mmalite nke ụzọ PI3K. Nke a nwere ike ime ka mgbochi mkpụmkpụ tumọ cell na lanarị na ndị mmadụ bi na ya. A na-enyocha Buparlisib ugbu a na ndị ọrịa na-arịa ọrịa dịgasị iche iche, gụnyere ọrịa kansa. Buparlisib emeela ka ọ dị ka onye na-akwụ ụgwọ na-eme ka anticancer, a gbakwara mbọ dị ukwuu iji mepụta ya. Otú ọ dị, buparlisib monotherapy emeela ka uru bara uru dị ugbu a. Ihe si na nchọpụta nke na-ejikọta buparlisib na ndi di iche iche nke anticancer - ya bu, ọgwụgwọ endocrine, ọgwụ HER2, na chemotherapy - egosiputa irè nke oma na onu ogugu.
Esi zuta Buparlisib si AASraw
LCZ696 ntụ ntụ (936623-90-4)
Obeticholic Acid ntụ ntụ
Melengestrol acetate ntụ ntụ
Fọfụ JP104 (887264-45-1)